Ahmed Galaydh on U ISTAAG SOMALIA MPLS MNmohamed anshur on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…سليمان on DARIIQA JANADA LOO MARO: QISO…siciid on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…Abdirizaak ahmed on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…wacyigelin on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…mohamed on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…Dr. Farxaan jama on DARIIQA JANADA LOO MARO: QISO…Peter Greste case: i… on Al-Jazeera’s Peter Grest…Johnd761 on LOS ANGELES CITY PLANER FAISAL…Mahad xiddig on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…wacyigelin on العلم والإيمان – د. مصطف…Bucul on DHOWR ASKERI OO KA GOOSATAY JA…En ismail abdi yasin on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…yassin saleh osman on KA TASHADA CADAAWOHOO ISKU TII…	MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA? SHEEKO YAAB LEH OO DHEX MARTAY JINNI MUSLIM AH IYO NIN SAXAFI AH!!!
Posted on September 4, 2010 by wacyigelin	Weli midkiin ma soo maray maalin uu kala dooran waayo inuu ooyo amase qoslo? Xaqiiqada ayuu ka waramay qofki yiri balaayo waxaa ugu daran tan kaa qoslisa . Taasi waa waxa aniga igu dhacay markuu gacantyda soo galay kutub cinwaankiisu yahay: Dood dhex martay nin saxafi ah iyo Jini muslim ah; waxaan ku fikiray inaan dhinac iska dhigo anigoo u arka inaanu wax faaiido lahayn laakiin waxaan bilaabay inaan baalasha kutubkaas rogrogo si aan u ogaado sida uu ninkaas saxafiga cabqarigaa ihi kula kulmay Jinnigan Muslimka ah.Waxaan ogaaday in ninkaas saxafiga ah uu sheegay sidan: Waxaa ilaa marki aan yaraa ii imaan jiray oo aan arki jiray jinniga. Waxaan dukaday salaadda istikhaarada dabadeedna goaansaday inaan la kulmo jinnigan muslimka ah si aan uga waraysto arimo badan oo quseeya jinniga gaar ahaan kuwooda muslimka ah. Marar fara badan ayaan wada kulanay oo waqti dheer ay qaadanaysay mar walba sheekada ina dhexmaraysay. Waxaan leehay ayuu yiri haiga raali noqdo aqristuhu hadii aanan ka hadlin sidi aan u kulanay aniga iyo jinnigan muslimka ah maxaa yeelay dhinac wax ay kordhinayso ma jiraan dhinaca kalena ma doonayo inaan xumeeyo Jinnigan muslimka ah oo wanaag falay si aan ula kulmo, tan labaadna qoka muslimka ah akhlaaqdiisa ayay ka mid tahay inuu xifdiyo sirti lagu aamino.
Intaa keliya kuma ekaan ee wuxuu tusaale usoo qaatay masaajido badan oo laysku dagaalay maamulkooda. Wuxuu sheegay in dagaalkaasi uu ku salaystanaa yaa maamulaya masaajidka oo dhaqaalaha gacanta ku dhigaya. Tusaale wuxuu usoo qaatay Soomaalida wadamada galbeedka oo iyagu buu yiri qabiil qabiil iskugu dagaala masaajidada qabiil walbana isku dayo inuu asagu awood ku yeesho si uu u hantiyo dhaqaalaha kasoo baxa. Si kale u dhig oo wuxuu taa ula jeedaa in masaajidadii cibaadada loo dhisay ay noqdeen sidii irdo ganacsi. Wuxuu intaa ku daray inaanay qowmiyadaha kale iyaguna sidaa ugu loolamaan sidii koox waliba iyadu u maamuli lahayd masaajidka. Balse wuxuu leeyahay Soomaalida waxaa alle ku aafeeyay oo ay dadka kale uga duwanyihiin qabiil iyadoo buu yiri laga yaabo in isku qabadka masaajid ku yaala Waqooyiga Ameerika ama Yurub uu dagaal ka rido gudaha Soomaaliya oo labadii qabiil oo isku haysatay masaajidkaa ay isku laayaan gudaha Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu si qota dheer uga hadlay sida Jinniga muslimiinta ahi uga xunyihiin khilaafka faraha badan ee hareeyay wadamada muslimiinta .
Asagoo sii wata hadalkiisa ayuu yiri, “Hadaad diintiina ka dhigtaan sida tan masiixiga oo aad business u bedeshaan sida aad hadaba samayseen alle raxmadiisa ayuu idinkala noqonayaa marka taa iska ilaaliya oo alle usoo noqda.”
Su’aal kale ayaan waydiiyay kuna saabsaneeyd ururada muslimiinta isku tilmaama ee dgaalka ka wada dunida dacaladeeda ayuu sheegay in runti dunida muslimka jahawareer daran ka taaganyahay maadaama aan la aqoon run ahaantii dadka soo dhisay ururadaan ama dhaqaalaha ku bixiya.Waxaaba laga yaabaa inay ururadan qaar soo dhiseen sirdoonka reer galbeedka iyaguna dhaqaalaha ku bixiyaaan si ay tafaraaruq iyo iska horimaad joogto ah uga abuuraan dunida muslimka. Maantay ma kala garan kartid cidda muslim saxa ah iyo cidda doonaysa inay denbi ku geliso xabsina ku dhigto. Intaas wuxuu sii raaciyay in loo baahanyahay in dhalinyarada muslimiintu ay feejignaadaan oo aanay cid kasta iska maqlin. Ogoow ninka masaajidka dhinacaada ku dukanay ma ogid inuu salaad u yimid ama u yimid inuu adiga ku jaajuuso ama uu siriq kuu dhigo kadib markuu kaa dhaadhiciyo inaad ka dhiidhiso waxa msulimiinta maantay lagu hayo. Markuu dhowr jeer kula sheekeeysto ayuu bilaabaa inuu ku yiraahdo bambo ayaan kuu keenayaa ee wax qarxi. Dabadeedna sidaas xabsi ku aadaa nin dhaliyaro aha oo wax wayn u qaban lahaa muslimiinta iyo insaanka oo dhan hadii uu wanaag ku dhaqaaqi lahaa. Wuxuu soo jeediyay inaanay dhalinyarada muslimiintu ku kadsoomin jihaadka loogu baaqo mararka qaarkood ogaadaana in jihaadka dhabta ah yahay inay iyagu naftooda toosiyaan wax wanaagsanna sameeyaan. Waa inay ku dadaalaan dhalinyarada muslimiintu inay bartaan diintooda iyo cilmiga madaniga ahba si ay ula jaanqaadan aduunka una fahmaan sida wax u socdaan oo aanay noqon kuwa layska hogaansado oo wixi la doono laga dhaadhiciyo. Maantay dhalinyarada muslimiintu waxay baylah u yihiin xabsi iyo dhimasho joogta ah oo ay u horseedayaan dad muslimiin ah oo aan ka fiirsan dhibka ay abuuri karto bambo yar oo meel lagu tuuro amaba sirdoonka reer galbeedka oo iaygu ku howlan sidii ay cabsi ugu abuuri lahaayeen dunida reer galbeedka isagana horkeeni lahaayeen masiixiyiinta iyo muslimiinta. Haddaba qofka muslimka ah maaha inuu dhib abuuro ee waa inuu wanaag abuuro noqdana mid lagu daysado. Dhaliyarada Muslimiintu maantay waa mashruuc lagu cuno balaayiin doolar hadii ay ahaan lahayd kuwa muslimiin ah oo jihaad ugu baaqa iyaguna lacag ku aruursada ama sirdoonka galbeedka oo dhaqaalohoodu ku xiranyahay kordhinta dhibka dhaca iyo weliba mararka qaar bedelidda maskaxda dhalinyarad si ay u sameeyaan denbiyo iyagoo mararka qaar u keena wixi ay wax ku qarxi lahaayeen. Marka dhalinyarada muslimiintu ha ka feejignaadeen labadan dhinac ee aan soo sheegay hana ka shaqeeyeen sidii ay horumar aqooneed iyo mid dhaqaale u samayn lahaayeen. Markuu qofku aqoon iyo dhaqaale leeyahay waxa uu awoodaa inuu wax wanaagsan u qabto dadka muslimiinta hadii ay ahaan lahayd inuu wax baro dad baahi u qaba waxbarashada ama quudiyo dad gaajaysan. Axsaanka aad falaysan dhaliyaroow yaanu ku ekaan muslimka oo keliya ee ciddi dhibaataysan diinti ay haysanayso ha haysatee u kaalmeeya markaad ka awood roontihiin.
Filed under: Uncategorized « الاتجاه المعاكس – الصومال GEESIGA DHULKIISA: HEES WADANI AH!!! »
En ismail abdi yasin, on July 29, 2013 at 716 said:	Waxaan umalaynayaa in aanay sheekadu xiiso u lahayn sgda ciwaanka oo kale laakiin waxa habonayd in ay balanced noqdaan.kkkkkkkkkkkkkkk?
Reply	Mahad xiddig, on April 23, 2014 at 716 said:	Waxay ahayd in uu siwado waraysiga inta barmuda moye inta kale insiga ayay kasiman yihin tana wala.oga
Reply	mohamed, on May 18, 2015 at 716 said:	Run ahaantii waa qiso cajiib ah.waxaan jeclaan lahaa in aan soo bandhigo sheekooyin ku saabsan dagaaladii sokeeye ee ka dhacey soomaali. Waxa dhacey muddo aad u fog .raadkii ay bulshadu ku reebtey dagaalada.
Reply	wacyigelin, on May 18, 2015 at 716 said:	waad noo soo diri kartaa sheekooyinka waanna kuusoo bandhigaynaa. Ku soo dir: wacyigelin@yahoo.com
Reply	Abdirizaak ahmed, on October 25, 2015 at 716 said:	runtii waa qiso xiiso badan lkin inu waraysiga barmuudo sii wado ayay ahayd
Reply	siciid, on December 4, 2015 at 716 said:	Arrintaa barmuuda waa sax. waa xaruntii jinka hada kahorbaan muxaadaro kudhagaystay. Nin shiikh muslin ah oo arday jin ah waxbara ayay uga wartameen arrintaa barmuuda inay jinka xatunta ugu wayn tahay
Reply	mohamed anshur, on April 8, 2016 at 716 said:	mansha allah lkn boogaaas magaciisa maxa uu aha aad iyo aad ayuu u wngsana in kastoo ay sheegado dhameystirney